देउवाले माधव नेपाललाई ५ सिटभन्दा बढी दिन सक्दैनन् – प्रदिप गिरि, नेता, नेकां (भिडियोसहित) « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
देउवाले माधव नेपाललाई ५ सिटभन्दा बढी दिन सक्दैनन् – प्रदिप गिरि, नेता, नेकां (भिडियोसहित)
काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरिले सभापति शेरबहादुर देउवाले माधव नेपाल समूहसंग चाहेर पनि प्रचार गरिएजस्ता गरी सांसदको सिट संख्या दिन नसक्ने बताउनुभयो । प्रदिप गिरिले भन्नुभयो – देउवाले चाहंदा बढीमा ५ सिट सम्म दिन सक्नुहोला । अरु कसले मान्छ ? देउवाले दिंदैमा नेपाली कांग्रेसका नेताले आफ्नो सिट छाड्छन् ?
एबीसी न्युज टेलिभिजनको कार्यक्रम आउटलुकमा प्रधान सम्पादक शुभशंकर कंडेलसंग कुरा गर्दै नेता गिरिले भन्न्ुभयो देउवा प्रचण्ड र माधव नेपाल सहितको गठवन्धन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अपदस्थ गर्नसम्म काम लाग्छ । त्यसपछि आ–आफ्नो बाटो लागिहाल्छन् ।
नेपालमा गठवन्धन संस्कृति नै नभएकाले लामो समय गठवन्धन जाँदैन । अहिले बनेको विपक्षी गठवन्धनको न कुनै कार्यक्रम छ न कुनै सार्वजनिक प्रतिवद्धता । यस्तो अवस्थामा कसरी गठवन्धन लामो समय टिक्छ ? गिरिले प्रश्न समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधि, विधान, नियम र लोकाचार केही पनि नचाहिने मानक कायम गरेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको भन्दै गिरिले व्यंग्य गर्नुभएको छ ।
गिरिसंगको विचारोत्तजक अन्तर्वार्ता शनिबार राती ९ बजे,आइतबार विहान ८ बजे र दिउंसो ३ बजे एबीसी टेलिभिजबाट प्रसारण हुनेछ । साथै एबीसी टेलिभिजनको फेसबुक पेजबाट समेत लाईभ प्रशारण हेर्न सकिने छ ।